Giringiriyey sagxadda dhulka, Rabadhka ka dusiyeen, waaxyihiisu dusiyeen, Rabadhka ka dusiyeen, Ruber Running Track - Top-Joy
rabadhka ka dusiyeen
Qaydhiin control wax
All dhagaxyada ah ee dib loo isticmaali karo caag, iyo xabagta tahay mid nabdoon iyo bay'adda u fiican, oo aan u nijaasayn. Waxa ay si adag u sheegno sida qaybta gaar ah si ay wax soo saarka.
Soo saarka si ay gacanta ku
All alaabooyinka yihiin si adag sida ay EN14041: 2004 / AC: 2006. Waxaan soo qaadan doonaa boqolkiiba certarin alaabta imtixaanka lagu jiro bilaabaan, dhexe iyo dhamaadka ee wax soo saarka. Warbixinta Baaritaanka waxaa la siin doonaa.
Waxaan ku siin doonaa hage ku rakibo si macaamiisha, sidoo kale siyaada ah loo baahan yahay. Besieds, waxaan bedeli doona alaabta ee bilaash ah haddii ay ku haysato dhibaato tayo leh.
6mm Black la EPDM Midabada Fleck waaxyihiisu ...
20mm EPDM dhagaxyada Gym Rubber Floor dusiyeen
Gudaha EPDM Rubber Gogosha dusiyeen Gym for miisaan ...
5/8 "Eco Miisaanka qaadayso Room Rubber Floor ...
Dusiyeen dabaqa EPDM Commercial Rubber for Gym Equi ...
10mm Red High siligga Xoog dib loo Rubber ...
3/8 1 inji * 15 Mugga High Green Crumb Rubber
5mm Black kabsada Rubber Dabiiciga Gogosha Rol ...
Red 13mm Qoyaanka-caddayn Rubber Mat Gogosha Tree goobada
1 * 1 dibada 30mm Green aqbasho Rubber istaagay Mats
20 "dusiyeen Floor Rubber raaxo Bright Functional
50cm * 50cm Yellow Full EPDM dhagaxyada dibada Rubber ka dusiyeen
TOP Rubber takhasusay Gogosha caag muddo ka badan 8 sano sida soo saaraha ah ee keenta iyo ganacsiga Combo shirkadda dunida oo dhan. waxyaabaha ugu muhiimsan yihiin dabaqa jimicsiga, dabaqa Functional, track orodka Rabadhka iyo nidaamka Garden. Waxaan leenahay sumcad wanaagsan loo gaarsiiyo deggan, tayo sare leh, qiimaha tartan iyo adeeg wanaagsan. OEM waa la heli karaa.
Top caag si joogto ah horumarinta cover cusub oo cusub dabaqa caag suuqa caalamiga ah, ka go'an in ay tallaabadaas your site la dabaqa ugu haboon oo soo jiidasho leh. Waxaan hadda bixiyaan adeega iyo wax soo saarka ee UK, Austria, Germany, USA, India, Ireland, Spain, Belgium, Italy, France, iyo Canada, Brazil, Afrika iyo wadamada Asia. Our caadiga ah adeeg One-stop for macaamiisheena keentaa qanacsanaanta sare inta lagu guda jiro geeddi-socodka iibka oo dhan. Xubnaha kooxda Professional tahay bukaan oo la kulmay si ay u xalliyaan arrimaha macaamiisha waqtiga oo dhan. Waxaan sii wax soo saarka oo tayo sare leh iyo qiimaha tartan rasmi ah ee suuqa, dhegeysano macaamiishayada ku saabsan shuruudaha iyo iyaga oo talo xalka sagxadda dhulka ku haboon. Aragtidayadu waa inay ku siiyaan adeeg raaxo iyo dabaqa ugu haboon.
waxay bixisaa aad u fiican, adeegga macaamiisha dhamaystiran tallaabo kasta oo jidka. Ka hor inta aadan dalban, ka dhigi dhex weydiimaha waqtiga dhabta ah ...